Onye isi oche Bossy zoro ya ozi - Gụọ Manhwa, Manhua, Webtoon, Webcomics, Manga, Comics online
Onye isi ala Bossy zitere ya nkezi 2.5 / 5 si 13
NA / A, o nwere ihe nlere 22.2K
Na-agụ Onye isi ala Bossy zitere ya ọmarịcha manwa.
Onye isi oche Comics Online chịkọtara ya. Nke a bụ akụkọ na-atọ ọchị banyere arụsị a ma ama nke ụlọ ọrụ ntụrụndụ kpọnwụrụ wee nwee ike ịnwekwu kilogram 100. O mechara rụọ ọrụ dị ka onye na-eje ozi n'ụlọ onye isi ala. O nyeere onye isi ala aka idozi nsogbu ya na mmekọrịta ya na ndụ ya. Mgbe o mechara tufuo ibu ahụ wee laghachi azụ ahịa azụmaahịa ahụ, ọ chọpụtara na onye isi ala na-eche ihu ihu na enweghị ike ịmata onye ọ bụ. O kpebiri ịga n'ihu na ndụ ya dịka onye kachasị ọrụ n'ụlọ ya.
Chapter 351	Nwere ike 31, 2021
Chapter 350	Nwere ike 24, 2021
Chapter 349	Nwere ike 18, 2021
Chapter 348	Nwere ike 9, 2021
Chapter 347	Nwere ike 2, 2021
Nwanyị Nwanyị Na-agwọ Ọrịa
Echefu di m, aga m enweta ego
Onye m hụrụ n'anya vampire